Tohina amin’ny fahitana toeram-piadiana ankizy ao Skopje ny Makedoniana · Global Voices teny Malagasy
Asian'ny mpikarakara vidim-pidirana ny ady
MpanoratraPavlina Simonoska Arsikj
Voadika ny 06 Marsa 2020 2:56 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, srpski, Nederlands, Italiano, English
Pikantsary tamin'ny lahatsary avy amin'ny samoprasaj.mk momba ny “adin'ny gladiatera” ankizy ao Skopje. Sary avy amin'ny Institute for Communication Studies, nahazoana alalana.
Vao haingana ny fampahalalam-baovao Makedoniana no namoaka ny fisian'ny “adin'ny gladiatera” karaikarana eo amin'ireo tsy ampy taona ao Skopje renivohitra, tantara izay mahasanganehana ny olom-pirenena.
Nahazo lahatsary mampiseho tovolahy roa miady eo amin'ny kianja, ahitana mpitazana am-polony, izay olon-dehibe no ankamaroany ireo mpitati-baovan'ny .SamoPrasaj.mk. Tazana ao amin'ny lahatsary ihany koa ny mpitsara iray.
Milaza ireo mponina natao fanadihadiana fa mateti-pitranga ny ady tahaka izao, saingy tsy avy ao amin'ny manodidina ireo mpandray anjara. .
Nanambara ny tohin'ny tantara avy amin'ny SamoPrasaj.mk fa ampandoavin'ireo mpikarakara ady vidim-pidirana: 20 denars (latsaky ny atsasaky ny dolara) ihany koa ny olona te-hijery ary 300 denars (6 dolara) raha handrakitra an-dahatsary.
Nilaza tamiko ny zanako lahimatoa fa mahafantatra ny fisian'ny lanonana tahaka izao izy. Tsy manatrika ireny izy fa nolazainy fa “nôrmaly ireny amin'ny taonany”. Kivy tokoa aho nandre izany, ary nanazava fa tsy nôrmaly ho an'ny ankizy ny mandray anjara amin'ny fifanandrinana tahaka ireny. Nilaza tamiko koa ny zanakolahy fa misy sarany ny lalao, ka tafiditra amin'izany ny 300 denara (6 dôlara) amin'ny fandraketana an-dahatsary ny ady amin'ny finday.
Nifandray amin'ny mpianatra dingana faha-8 avy amin'ny sekoly manakaiky ny kianja nandraketana ny lahatsary iray ny Global Voices. Nilaza ry zareo ireo fa nisy mpiara-mianatra tamin-dry zareo nijery ireny ady ireny, ary nolazainy fa nampandoa 50 denars (1 USD) isaky ny “tapakila tsotra” ny mpikarakara ary 200 denars (3,50 USD) kosa ho an'ny “VIP” izay tena akaiky ny ringy izany.
Mandritra izany fotoana izany, nilaza ireo fampitam-baovao ao an-toerana fa miloka izay mandresy ihany koa ireo olon-dehibe manatrika ireny ady ireny.
Mbola tsy mazava hoe hanao famotorana momba ny toe-javatra ve ny polisy, mbola hofantarina ihany koa hoe iza no mpikarakara. Ho valin'ny fanadihadiana iray nataon'ny gazety Sloboden Pechat, nilaza ny minisiteran'ny ny atitany fa efa nandray fepetra ny manampahefana, toy ny nanomezana naoty ny fampanoavana sy ny fandrisihana ny polisy hamantatra hoe tahaka ny ahoana ny lafiny ara-panabeazana omen'ity (toe-javatra ity) any an-tsekoly.
Hatramin'izao aloha dia Makedoniana maro no tsy faly amin'ny fomba famalin'ny manampahefana. Rehefa nanatona ny minisitry ny fanabeazana, Arbër Ademi, ireo mpanangom-baovao, dia zara raha miteny izy, satria any ivelan'ny sekoly no mitranga ny ady dia tsy manampahefana momba azy ireny ny minisitera.
Ny kianja nandraketana ireny lahatsary dia miorina ao amin'ny monisipaliten'i Centar, ary eo ambany fahefany avokoa ireo sekoly manodidina izany toerana izany. Fa dia mbola miteny ihany koa ny Ben'ny tanàna Sasha Bogdanovikj fa tsy mponina ao amin'ny monisipalite ireo ankizy hita ao amin'ny lahatsary.
Adin'ankizy tsy ampy taona nomanina, ho endrika fialamboly andoavambola, ary mitranga ao amin'ny manodidina an'i Kapishtec izany rehetra izany? Koa raha mitranga ao afovoan-tanànan'i Skopje ary ny toe-javatra tahaka izany, tokony hihevitra ve isika fa nobeazina hanao ireny ady ireny ny ankizy any amin'ny toeran-kafa? Makedonia toa adala, fadiranovana ary mihemotra.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay dia voatatitra fa mitranga any amin'ny toeran-kafa manerantany ny ady mahatafiditra ankizy tahaka itony, ka ao anatin'izany i Alberta, Canada; St Louis, Etazonia; ary Preston, Britanika Lehibe; sy Moskoa, Rosia.
Ny atsasaky ny mpianatra 13 ka hatramin'ny 15 taona manerantany – manodidina ny 150 tapitrisa – no voalaza fa niharan'ny herisetran'ny mitovy taona aminy (ady ara-batana sy fampijalian'ny lehibe kokoa ny kely kokoa) ao anaty sy manodidina ny faritry ny sekoly araka ny tatitry ny UNICEF nivoaka tamin'ny taona 2018. Araka ny nolazain'ny vondrona mpandala ny zon'olombelona Makedoniana ao amin'ny Komitin'i Helsinki, izay vao namoaka fanambaràna mitaky amin'ny manampahefana mba hihetsika manoloana ireo “klioban'ady” ireo, voalazan'ny tatitra fa ny 42 isanjaton'ny mpianatra 13 ka hatramin'ny 15 taona ao Makedonia Avaratra no niharan'ny herisetra nataon'ny mitovitovy taona aminy.
Famotorana hafa no nampiseho fa ampahany manandanja amin'ny lasibatra (36 isanjato) sy ny nahavanon-doza (18 isanjato) amin'ireo heloka bevava noho ny fankahalana ao Makedonia Avaratra no tsy ampy taona. Ny fiaviana ara-poko sy ny fikambanana antoko misy ny olona iray no antony voalohany nahatonga ny heloka bevava noho ny fankahalana tamin'ny taona 2018, ary vitsivitsy kokoa amin'izany no mahavoarohirohy mpialokaloka na mpifindramonina, ary manana fahasembanana.